Garoowe : “Xarunta Dadka Dhimirka waxaa laga sii daayey 12 qof oo Caafimaaday ” Gudoomiyaha Nasrullah. | Sahan radio
Garoowe : “Xarunta Dadka Dhimirka waxaa laga sii daayey 12 qof oo Caafimaaday ” Gudoomiyaha Nasrullah.
Garoowe (SR): Magaaladda Garoowe waxaa ku yaal xarun balaran oo lagu dabiibo dadka qaba xanuunadda Maskaxda ku dhaca ,waxaana dadkaasi ay ka kala yimadeen guud ahaan deegaanadda ay soomaalidu degto iyo wadamada dariska ah.
Xarunta ayaa laga fasaxaa dadka caafimaadkooda dib u hela kadib daaweyn iyo Nasin badan oo loo sameeyo dadkasi,Waxaana gacanta ku haya Urur Maxaliya oo lagu magacaabo NASRULLAH ,Gudoomiyaha Ururkaasi Xaawo Axmed Maxamed (Qaylo weyne ) ayaa Sahan Radio u xaqiijisay in todobaadkaan ay Xarunta ka baxeen 12 ruux oo isugu jira 12 Rag ah iyo 1 Haween ah , kuwasoo dib u helay Maankoodii.
Gudoomiyaha Ururku waxaa ay sheegtay in ay dadka siiyaan daawooyin dajinaya maskaxda iyadoo Xarunta marka qofka la keenana laga joojiyo waxyaalaha Maandooriyaha ah ee uu magaalada ku cuni jiray ee ka qaybqadanaya Wareerka iyo Marxaladda adag ee uu la kulmo qofka madaxa lagaga jiro.
Xaawo Qayloweyne waxaa ay sheegtay in dadkaan intooda badan aanay ehel u joogin magaaladda Garoowe ee uu markii horeba ururku ku tabarucay in ay xananeyaan oo ay kasoo xareeyaan Magaaladda oo ay dhibaato badani ku haysatay ” Dadkaan aanu hayno intooda badan ma jirto cid magaaladda u joogta ama daryeelkooda qoys ahaaneed ayaaba aad u liita markaa anagu waxaanu ku tabarucnay in aanu halkaan ku daryeelo wixii awoodeena ah “,Xaawo Qayloweyne.
Gudoomiyaha Ururka Nasrullah ayaa bulshada reer puntland qaybaheeda kala duwan waxaa ay ka codsatay in ay gacan ka gaystaan ummadda Xaruunka maskaxda la nool ee u bahan saacidada ,iyadoo ay ka midyihiin meelaha loogu talo galay in sadaqada lagula baxo oo ay ku waajibtay.
Xerada dadka qaba xanuunadda Dhimirka (Waalida ) ayaa waxaa ay dhanyihiin 80 qof oo isugu jira Rag iyo Haween waxaana ay la ildaranyihiin nafaqo iyo daryeel la,aan iyadoo aanay jirin cid gacan muuqata ka gaysata xarunta ay ku jiraan marka laga reebo Ururka NASRULLAH ee gacanta ku haya oo bulshada usoo gacan mariya.